Intaba-mlilo iTeneguía nokuqhuma kweLa Palma: konke odinga ukukwazi | Isimo Sezulu Senethiwekhi
Intaba-mlilo iTeneguía nokuqhuma kweLa Palma
IsiJalimane Portillo | 20/09/2021 14:46 | I-Geology
El Intaba-mlilo iTeneguía esesiqhingini saseLa Palma eCanary Islands, iqhume ngeSonto, ngo-Septhemba 19, 2021 ngo-15: 12 ntambama. Kusukela lapho, yonke imithombo yezindaba ibheke okungahle kwenzeke. Kungokunye ukuqhuma okungokomlando okufana nalokho okuke kwenzeka kuleli qoqo lezintaba-mlilo futhi yilona okuzokhulunywa ngalo kakhulu eminyakeni ezayo.
Kulesi sihloko sizokutshela ukuthi yini izimbangela nemiphumela yokuqhuma kwentaba-mlilo iTeneguía, izici zayo nokuphikisa ezinye izinkohliso.
1 Ukuqhuma kwentaba-mlilo iTeneguía
2 Ukuvimbela nokubikezela ukuqhuma
3 Ukungaqondakali kahle nezinkohliso zentaba-mlilo iTeneguía
Ukuqhuma kwentaba-mlilo iTeneguía
Ukuqhuma kwe-El Hierro kwenzeka eminyakeni eyi-10 eyedlule kanti lokhu kuqhuma kunezici ezicishe zifane nokunye ukuqhuma okwenzeke kulezi ziqhingi. Ukuqhuma kwentaba-mlilo iTeneguía kungohlobo lwe-strombolian futhi iqala ngokuqhekeka nangokukhishwa kwama-lava, ama-pyroclast namagesi. Ukuqubuka kuvame ukuthatha amasonto ambalwa kuye ezinyangeni ezimbalwa.
Kumele sithole imbangela yokuqhuma kokuqongelelwa kwamagma ezansi kwesakhiwo sentaba-mlilo eLa Palma (amakhilomitha ayi-6 kuya kwayi-8 ukujula). I-magma ivela engubeni futhi ikhiqizwa endaweni elandelayo esiyibiza ngokuthi i-asthenosphere. Kungamashumi amakhilomitha ukujula. Kule ndawo, isimo sengcindezi nezinga lokushisa livumela amadwala atholakala lapho ukuba ancibilike kancane, kukhiqize i-magma. Ubuningi balolu ketshezi olwenziwe nge-silicate oluqukethe imfucumfucu yamatshe, amakristalu amisiwe kanye negesi encibilikisiwe lungaphansi kobuningi bamadwala azungezile.
Ngokubheka umehluko wobuningi nedwala elivalekile, lapho i-magma iqongelela inani elanele, izosebenzisa imifantu ekhona edwaleni noma imifantu engakhishwa yi-magma uqobo (ngenxa yobukhazikhazi) ukukhuphukela endaweni engajulile. Ngakho-ke, kukhuphukela emazingeni aphansi okucindezela namazinga okushisa, futhi inganqwabelana ezingeni eliphakathi nendawo endaweni yokuxhumana phakathi kwamatshe emvelo ehlukile. Lapho i-magma yanda ngobuningi obanele, isebenzisa imifantu ekhona edwaleni ukukhuphukela endaweni engajulile.
Ukuvimbela nokubikezela ukuqhuma
Lezi zindawo zokuqongelela, esizibiza ngokuthi ngamachibi e-magma noma amagumbi e-magma, avumela i-magma ejulile ukuthi iqoqane isondele ngaphezulu, edala ukucindezela ngokweqile futhi ikhubaze futhi iqhekeze amadwala azungezile. Lokhu kuholela ekwandeni kokuzamazama komhlaba nokuguquguquka kwenhlabathi njengoba kulinganiswa nemishini yokuqapha intaba-mlilo. Ngokufanayo, lapho kuvuleka ufa, kukhishwa amagesi ku-magma, futhi lawo magesi afanayo aqoshwa yile mishini efanayo. Yile ndlela esazi ngayo ukuthi intaba-mlilo ilungiselela ukuqhuma okusha.
Eqinisweni, uma kukhulunywa ngokuqhuma kwentaba-mlilo iLa Palma, inqubo yangaphambi kokuqhuma yaqala ngoSepthemba 11, umsebenzi wokuzamazama komhlaba kanye nokukhubazeka komhlaba kwanda kakhulu futhi ukukhishwa kwegesi yemagma kusekhona kuze kube namuhla. Lokhu kukuvumela ukuba ubikezele ukuqhuma futhi uthathe izinyathelo ezidingekayo zokuvimbela nokunciphisa izingozi ezihlobene nokuhlasela.
Ukuqhuma okusathuthuka akumele kubandakanye ubungozi obuhlobene nendawo lapho kugeleza khona udaka, olulawulwa ngokuphelele isimo sendawo, futhi imfucumfucu yentaba-mlilo iqoqana nxazonke zalokho kuqhuma, ekugcineni kwakheke izakhiwo ezihambisanayo zentaba-mlilo. Amagesi wentaba-mlilo, njenge okutholakala kwesibabule noma isikhutha uqobo, zikhona futhi kufanele zicatshangelwe ngenxa yezingozi ezizimele, yize zikhawulelwe endaweni efanayo nemikhiqizo yangaphambilini.
Isikhathi sokuqhuma sincike enanini lemagma elingakhishelwa ngaphandle, okunquma ukucindezelwa ngokweqile okusetshenzisiwe kusuka ikamelo le-magma futhi limisa ukuqhuma lapho ukucindezelwa ngokweqile kubuyiselwa endaweni yayo. Ukuqhuma kwangaphambilini kufana nokuqhuma kwamanje, ngobude obusukela emasontweni ambalwa kuye ezinyangeni ezimbalwa.
Ukungaqondakali kahle nezinkohliso zentaba-mlilo iTeneguía
Kuyacaca ukuthi okuningi kwale micimbi kudinga ulwazi ngesiko eliyisisekelo ngayo. Inani elikhulu lezindaba likhiqize imininingwane ethile yokukhohlisa okumele inqatshwe. Ake sibone ukuthi yiziphi okuyizona eziphambili:
Ukuguguleka kwenhlabathi nokufudumala kwembulunga yonke: abanye bacabanga ukuthi ukuqhuma kwale ntaba-mlilo kuhlobene nokushisa komhlaba. Ukufudumala kwembulunga yonke akuhlangene nalokhu kuqhuma. Idalwa yimvelo yentaba-mlilo yesiqhingi nemvelaphi yaso. Kuyinto evamile ngenxa yesimo sayo sokuma komhlaba.
Kubangele i-tsunami eBrazil: Lokhu kungenye yezinkohliso. Lokhu kuqhuma akubanga noma yiluphi uhlobo lwe-tsunami.
ITeide izocushwa: Okunye okukhohlisayo okusakazwa ngamanethiwekhi ukuthi le volcano izokwenza kusebenze iTeide. Abukho ubufakazi balo. Kuke kwaba nokhetho lwakamuva kanti iMount Teide ayizange iqhume ngenxa yalo. Futhi izinhlelo eziningi zentaba-mlilo azixhunyiwe komunye nomunye.
I-Lava ayinakuqedwa ngama-hoses: Yize kubonakala kusobala, basekhona abantu abakholelwa ukuthi izicishamlilo zingacisha udaka ngamaphayi abo amanzi.
Ukuqhuma kwentaba-mlilo kungabikezelwa: ukuqhuma kwentaba-mlilo kulula ukubikezela kunokuzamazama komhlaba. Futhi ngukuthi bahlala bexwayisa ngokuguqulwa okuncane endaweni noma ngokuzamazama komhlaba okuncane. Bangabuye baxwayise ngomusi nezinye izimpawu. Noma kunjalo, kunzima ukunquma usuku nesikhathi esifanele sokukhetha intaba-mlilo.
Isitobhu sezindiza: kuyinto abantu abakhathazeka ngayo. Okunye ukuqhuma kukhipha umlotha wentaba-mlilo amakhilomitha amaningana esibhakabhakeni, okuvame ukuholela ekuvalweni kwendawo yomoya. Endabeni yalolu khetho, akubonakali ukuthi kungadala noma yikuphi ukuvalwa kwe-airspace ngoba ikholomu yentuthu ayinkulu njengakwezinye izintaba-mlilo.
Ngiyethemba ukuthi ngalolu lwazi ungafunda kabanzi ngeTeneguía a volcano, ukuthi yiziphi izici zayo futhi uphikise ezinye zezinkohliso ezisakazwa ezinkundleni zokuxhumana.
Indlela ephelele ye-athikili: Isimo Sezulu Senethiwekhi » I-Geology » Intaba-mlilo iTeneguía nokuqhuma kweLa Palma